Ihe ngosi RC: Nbili nke Aurora West | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
RC kwadoro: Mbili nke Aurora West
Akụkọ ọchị | | Emelitere na 29/01/2019 12:04 | Egwuregwu
Na ọtụtụ n’ime unu ga-ekwu na ihe kpatara m ji eme nyocha ahụ na aha bekee. Ọfọn, kpomkwem n'ihi na m nọ n'oké ihe mgbu na enweghị m ike ichere ka ewepụta ya na Nọvemba Oge Aurora West, site n'aka Akpa-nha. Ya mere, ọnwa ole na ole gara aga, emere m ndoputa m ịzụta mbipụta mbụ nke Nke Abụọ mgbe ọ na-ere ya na mbido Ọktọba. Nbili nke Aurora West na-arụ ọrụ dị ka atụ ogho-apụ si Battling Boy karịa dị ka prequel. O yiri ka Paul poopuNna nke ihe e kere eke na talent nke na-erubiga ókè, ezubewo site ná mmalite na Haggard West na obere Aurora ha kwesịrị ohere karịa ka ha nwere Nta Nwa. Site n'okwukwe ha nwere ya na akụkọ a na ọ na-akọwapụta ya na onye na-ede akwụkwọ JT Petty. Eziokwu bụ na ndị Fans ga-enwe ekele dị ukwuu maka nke a, n'ihi na mgbe ha gụsịrị Nbili nke Aurora West Enwere m ike ịsị na ị gaghị echefu nsụgharị Spanish ma ọ bụrụ na ị gaghị anwa anwa na Bekee.
N’otu aka ahụ, anyị kwesiri inwe ekele n’ebe Pope nọ maka ịgwa ya okwu David rubin ka ị na-ahụ maka ngalaba eserese. El ourensano, onye akpọrọ aha ihe osise kacha mma nke afọ na Avilés Comic Conference na nso nso a maka nnukwu ọrụ ya Beowulf, na-arụ ọrụ pụrụ iche na ibe 150 niile mejupụtara mpịakọta mbụ a. Kedu ihe ọzọ, m ga-ekwu na n'akụkụ ụfọdụ, ọ na-enwetakwu ihe odide karịa Pope n'onwe ya. O doro anya na ọ nwere carte blanche ime na imeghe na okwu nke akụkọ na imewe nke ụfọdụ peeji nke, ebe m na-anọ n'elu ihe ọma niile, na iji zuru ezu gbaa na mmetụta uche nke Aurora ihu na-ebunye West, protagonist na nkịtị eri nke akụkọ a na-ahapụ akụkọ akụkọ ọdịnala kachasị nke ọ nwere Nwa nwoke na-alụ ọgụ, iji kọọrọ ihe ụwa dịka mmekọrịta dị n'etiti nwa nwanyị na nna ya. Onye ọ bụla achọghị iri ụfọdụ nāpunara, ọ bụ ezie na m gbalịrị idebe ha ntakịrị ikwu okwu nke nkọwa zuru oke ma ọ bụ n'ozuzu, na anaghị m pịa Gaa n'ihu na-agụ. A na-akpọ ndị fọdụrụ ime otu ahụ.
The Ibili nke Aurora West gwa ihe mere n'ime Arcopolis tupu ihe ndị mere na Nwa nwoke na-alụ ọgụ. Pope, Petty na Rubín gosi anyị ndụ ezinụlọ West site na ebe dị iche iche. A tupu na mgbe akara ọkụ site na ihe omume dị oke egwu nke gbanwere ịdị adị nke nna na nwa nwanyị. Oge a na-enye anyị ohere ịhụ mgbanwe nke Haggard West site na dike sayensị na ọdịnala nke ndị odide dịka Doc obi tara mmiri (na uwe ụtụ nke iwepu okpu ya), ọnọdụ onye nche abalị na-ata ahụhụ Batman (ihe omume na uzo, mgbịrịgba dị ka mgbaàmà ịdọ aka ná ntị site na kọntaktị na ndị nwe obodo ...). Aurora si na ịbụ obere nwa nwanyị nwere obi ụtọ nwere oke ọchịchọ ịchọta ihe ọhụrụ, gaa n'ihu na-eso mmụọ ahụ nwere mmụọ ịmata ihe, n'ọgụ a na-alụso nnukwu anụ ndị na-achụ ihe kachasị nsọ nwere ike ịbụ: ụmụaka. Naanị otu ụzọ ọ ga - esi nọrọ n’akụkụ Haggard bụ ịga n’ihu n’ọdịnala ezinụlọ ahụ, n’usoro nke gbanwere ya site na onye ọrụ ọrụ na onye nọchiri ya. Ma ọ bụ na akụkụ ikpeazụ nke njem ahụ karịa ndụ ruo aha ọrụ a.
Pope na Petty na-etolite nkata ebe a na-agwakọta ihe aghụghọ, ihe nzuzo ezinụlọ na ọtụtụ mmetụta na ọkwa niile. Mana nke kachasị mma bụ na anyị na-eche ihu akụkọ na-eto eto na ndị okenye nwere ike ịnụ ụtọ ya, yana nsogbu nke a na-anọchite anya ya. Agwa dika Croward ma obu dwarf catfish (onyogho nke ndi Gremlins na uche m) ndị na-arụ ọrụ maka Medula, ha dị ka ọ kwụ ọtọ nke usoro katuunu ma ọ bụ akụkọ. Anyị na-ahụ ọzọ dị mkpa nke abụọ Nwa nwoke na-alụ ọgụ dị ka Sadisto na ìgwè ya (otu n’ime ha na-arụ ọrụ dị oké mkpa), Miss Gused ma ọ bụ Captain nke Division 145. Atụmatụ Rubin na-enyere ọtụtụ aka ime ka olu ahụ dị ọhụrụ, na-atọ ụtọ ma nwee ụda ahụ dabara maka ọgbọ ọ bụla. Naanị ihe achọrọ tupu ị gụọ To Bilie nke Aurora West bụ iji kwadebe ịnụ ụtọ ịgụ ihe na-enweghị mmachi.
Mbipụta nke abụọ nke abụọ dị mfe mana ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, yana nke adịghị ọnụ ala n’akpa (maka ihe na-erughị € 8 na Akwụkwọ Akwụkwọ). Ọtụtụ oge anyị na-echefu na a na-eme ka ndị na-atọ ọchị bụrụ ndị a gụrụ, ọmarịcha ihe mkpuchi siri ike na-ebupukwa anyị, mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri anyị ike ma ghara iru ala mgbe anyị na-agụ ha ugboro ugboro. Mbipụta mbụ a dị na oji na ọcha dị ebube, n'adịghị ka ihe m gụrụ (nke m na-ahụbeghị) nke nke Debolsillo ga-ere ahịa n'ime izu ole na ole, nke ga-abụkwa agba ma na-akwụ ụgwọ dị mma. Amaghị m etu ọ ga-adị, mana ekwuputara m na enwere m ọ theụ peeji dị ka nwatakịrị na-enweghị mkpa agba. Anyị ga-eji ịnụ ọkụ n'obi na-eche n'ihu nke nnukwu saga a na olu nke abụọ, Ọdịda nke oflọ West, ọ bụ ezie na tupu akụkụ nke abụọ nke Nwa nwoke na-alụ ọgụ, na Pope na-agbake akụkụ ya nke onye edemede zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Egwuregwu » RC kwadoro: Mbili nke Aurora West
David rubin dijo
Ndewo, daalụ maka nnukwu nyocha a!
Ana m ede ihe iji kwuo na, dị ka onye na-ede akwụkwọ ahụ, dịka m maara, mbipụta Spanish ga-aga nha otu nke America, nke bụkwa otu m siri tụrụ akwụkwọ, na enweghị agba.
Ekele m daalụ!
Zaghachi David Rubín
Joseph okechukwu (@onyedikachi_) dijo
Atụkwasịla obi na ozi Debolsillo wepụtara, nke dị na ụbọchị ya BattlingBoy wepụtara ya na B&N.
Zaghachi Jose Angel Ares (@JoseAngelARES)
M pụtara, ọ bụ naanị ụzọ ọzọ, ọ bụghị ugbu a
Zaghachi Roberto Corroto
Ọnọdụ ọjọọ nke Childrenmụaka nke Ndị Eze Katọlik
VIII Nrite Mba Nile maka Akwụkwọ Ọkwa